eSports, coming right up! – REDPlayer
eSports, coming right up!
Competative ဂိမျးကိုဘယျတုနျးကစဆော့ဖူးလဲ ? ဒါမှမဟုတျ Game ဆိုငျသှားပွီး သူငယျခငြျးအခငြျးခငြျး Counter ဘယျတုနျးကစပဈဘူးလဲ? Red Alert ဆိုတာကို မှတျမိဦးမလား? အဲ့အခြိနျကတော့ ဒီနေ့လို့ ပွိုငျပှဲကွီးတှဖွေဈလာမယျလို့ တှေးခဲ့ဖို့နနေသော နတေိုငျး သူငယျခငြျးတှနေဲ့ ဆိုငျမှာ အောျဟဈ ဆဲဆိုပွီး ဆော့ကစားခဲ့ကွတာနဲ့တငျ ပြောျခဲ့ကွမှာပေါ့။
အဲ့ဒီလို သူငယျခငြျးအခငြျးခငြျး အစပွုပွီး ဂိမျးဆိုငျလေးတဈခုမှာဆော့ခဲ့ရာကနေ အခုတော့ နိုငျငံတောျတောျမြားမြားမှာ professional player တှနေဲ့ အတညျတကြ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ Team တှေ၊ အဖှဲ့အစညျးတှေ ပေါျပေါကျလာပါပွီ။
ဒီ article ရညျရှယျခကြျကတော့ eSport အကွောငျး မသိသေးတဲ့ သူတှေ အတှကျ ရညျရှယျပါတယျ။
ဟုတျပွီ။ ဒါဆို What is eSport?
eSport ဆိုတာကတော့ Electronic sports, eSports, e-sports, competitive (video) gaming, professional (video) gaming, pro-gaming) ကိုခေါျပါတယျ။ Computer ကိုကွားခံအဖွဈ အသုံးပွုပွီးတော့ player တဈဦးခငြျး ဒါမှမဟုတျ အသငျးလိုကျဖွဈစေ၊ သတျမှတျ ဂိမျးတဈခုမှာ ယှဉျပွိုငျရတာပဲဖွဈပါတယျ။ Game တှကေ မြားသောအားဖွင့ျတော့ real-time-strategy, first person shooter (FPS) နဲ့ multiplayer online battle arena (MOBA) တှဖွေဈကွတာမြားပါတယျ။
The International, the League of Legends World Championship, the Evolution Championship Series နဲ့ Intel Extreme Masters အစရှိတဲ့ ပွိုငျပှဲကွီးတှကေတော့ Pro-player ကို ဆုကွေး အမြားအပွား ခြီးမွှင့ျပေးပွီးတော့ တဈခွားအားကစား တှလေိုပဲ TV channel ကနေ Live လှှင့ျပေးကာ ကွည့ျရှု့သူမြားလညျး သနျးခြီ ရှိနပေါပွီ။
ဒီ ပိုစ့ျမှာတော့ အဲ့ဒီပှဲတှအေကွောငျး လကျလှမျးမှီသလောကျတော့ ရေးပေးထားပါတယျ။ အခြိနျရရငျတော့ ဆကျ ဖတျကွည့ျပေါ့ဗြာ။ အမှားပါရငျလညျး ဆောရီးပါဗြာ။
ကဲ . . . . တကယ်တော့ ဒီပွဲတွေရှိလာတာ အခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ 2000 ခုနှစ်ဝန်းကျင် ကတည်းက ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်အလုပ်မဖြစ်ခဲ့သေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ လည်း မှတ်မိတဲ့ သူတွေတော့ ရှိဦးမယ်နဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ red alert တို့ age of empire (AOE), starcraft တို့ကို battle net online မှာ lobby ထောင်ပြီးတော့ ဆော့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတုန်းက 2000-2001 ခုနှစ် လောက်ပဲရှိဦးမယ်ထင်တယ်။
2010 မှာတော့ ဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီးအောင်မြင်လာတာက MOBA ဖြစ်တဲ့ Dota2နဲ့ league of legends ရယ်။ ပြီးတော့ FPS ဖြစ်တဲ့ Counter-strike: Global Offensive တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နာမည်ကြီးတွေကတော့ Smite, Starcraft II, Call of Duty, Heroes of the Storm, Heartstone နဲ့ Overwatch တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအောင်မြင်လာတာက တိုးတက်လာတဲ့ streaming platform တွေကြောင့်လည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ Gamer တွေအတွက်ကတော့ အထူးတလည်အားဖြင့် Twitch.tv ကိုသုံးကြပါတယ်။
ကြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာလည်း ထူးဆန်းစွာ အမျိုးသမီးတွေပါ ပါလာတာကို တွေ့ရမှာပါ။ Major League တွေကို ကြည့်၇ှုသူ ၈၅% လောက်က အမျိုးသားနဲ့ ကျန်တဲ့ ၁၅% က အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှ အသက် ၁၈ ကနေ ၃၄ နှစ်ကြားရှိကြတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဂိမ်းကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ အမျိုးသမီး အရေအတွက်လည်းတိုးပွားလာနေတာကို နောက်ပိုင်းမှာ နေရာအတော်များများကို ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
ရေမြေစစ်တမ်းတွေအရဆိုရင်တော့ တောင်ကိုရီးယားက ဂိမ်းလောကမှာ အတိုးတက်ဆုံးလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။ သူ့နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ eSport အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေပြီးတော့ pro-gamer တွေကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့လိုပဲ တိုးတက်မှုမြန်တဲ့ နေရာတွေကတော့ ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက နဲ့ တရုတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာက final fantasy တွေဆော့ပြီးတော့ ဂျပန်က ဦးဆောင်မယ်ထင်ထားတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်က eSport မှာတော့ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ (အခုစာရေးတော့မှသိတယ် သူ့မှာ လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်းကျပ်တာတွေရှိတော့ ဒါကြောင့် eSport တိုးတက်မှုနှုန်းကလည်း တစ်ခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ကျန်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။)
ငွေကြေးအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း 2015 ခုနှစ်တစ်ခုတည်းမှာပဲ eSport ရဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဝင်ငွေက USD325 သန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါတောင်မှ 2015 မှာ ပရိတ်သတ်က 226 သန်းပဲရှိခဲ့သေးတာပါ။
eSport စတင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပါဘဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ 1997 ခုနှစ်လောက်မှာ အာရှစီးပွားပျက်ကပ် ဖြစ်ပါလေရော။ သူကအဲ့အချိန်မှာ broadband internet ကိုကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်မိရက်သားဖြစ်နေတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ စီးပွားကလည်းကျတော့ အလုပ်လက်မဲ့ဦးရေများလာပြီး လုပ်စရာမရှိ ဂိမ်းထိုင်ဆော့ကြရင်း ဒီလိုဖြစ်လာတယ်လို့ ဟာသအနေနဲ့ပြောကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အံ့သြဖို့ကောင်းတာက 2000 ခုနှစ်မှာတင် သူ့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစားနှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန (The Ministry of Culture, Sports and Tourism) လက်အောက်မှာ The Korean e-Sports Association ဆိုပြီး e-sport ကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုတဲ့ ဌာနတစ်ခုဖွဲ့လိုက်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ အဓိကအလုပ်က eSport နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ Event တွေ ပြိုင်ပွဲတွေ ကိုဦးစီးဖို့ပါ။ 2014 မှာ league of legend World Championship ကို Seoul မှာပြိုင်ပွဲလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ fan 40,000 လောက် သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
2010 မှာမှ ဝုန်းကနဲ ဆုကြေးငွေတွေအများကြီးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီပွဲတွေက 2000 ခုနှစ်အကျော်လေးကတည်းက ရှိနေပြီးသားပါ၊ the World Cyber game, the Intel Extreme Master နဲ့ Major League gaming ဆိုတာတွေက အဲ့ဒီခေတ်ကတည်းက တည်ထောင်ခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့တုန်းက pro-gamer လို့ပြောရင် ဘာအလုပ်လုပ်လဲ ပြန်မေးခံရပြီးတော့၊ လူမလေးခွေးမခန့်နဲ့ ဘာအလုပ်အကိုင်မှမယ်မယ်ရရမရှိ ဆန်ကုန်မြေလေးလို့ အပြောခံရတဲ့ အချိန်တွေပေါ့ဗျာ။
Pro-gamer တွေအတွက် rules & regulations တွေအတွက် pro-counter strike Team တွေဖြစ်တဲ့ 4Kings, Fnatic, Made in Brazil, Mousesports, NiP, SK-Gaming, Team 3D တို့က G7 Team ဆိုပြီး 2006 ခုနှစ်မှာ စဖွဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ အဲ့အဖွဲ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က pro-player တွေရဲ့ အရွေ့အပြောင်းကိစ္စတွေ၊ eSport အခြေခံစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြီးတော့ eSport Culture ကို ထွန်းကားအောင် လုပ်ဖို့ ဖြစ်ပေမဲ့ အကြောင်းမလှစွာနဲ့ဘဲ 2009 ခုနှစ်မှာတော့ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။ Streaming apps တွေများလာပြီးတော့ internet speed ပိုကောင်းလာလို့လား မသိဘူး၊ live broadcast လုပ်တဲ့ TV channel တွေက 2000 ခုနှစ် အရှေ့ပိုင်းမှာဆိုရင် သိပ်ကြာကြာ မခံကြပါဘူး၊ ရပ်သွားကြတာ များပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူတို့ season နည်းနည်းပဲ ပြနိုင်ပါတယ်။
Developer တွေကလည်း သူတို့ ဂိမ်းတွေကို eSport ရောက်တဲ့အထိ တွန်းတင်လို့ရအောင်လုပ်လာကြတာတွေ့ရပါတယ်။ 2010 တုန်းကဆိုရင် Nintendo ကနေ Wii Games Summer 2010 ဆိုပြီးတော့ ပွဲလုပ်ပါတယ်။ လူ 400,000 လောက်လာပါတယ်။ တစ်လလောက်ကြာပြီးတောNintendo ကပဲ 2014 ရဲ့ Electronic Entertainment Expo (E3) မှာ Super Smash Bros ကို Wii U အတွက်ပြိုင်ပွဲထပ်လုပ်ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ သူက Twitch ကနေ Live လွှင့်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီပွဲမှာပဲ Halo ကလည်း ပြိုင်ပွဲရှိမှာဖြစ်ကြောင်းကြေငြာပြီး USD50,000 ဆုကြေးနဲ့ Halo Championship Series ကိုကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ 2016 ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ ဆုကြေးငွေ USD2.5 သန်းဖြစ်နေပါပြီ။
2013 လောက်ကစပြီးတော့ တစ်ချို့ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်ကျောင်းတွေမှာ e-sport pro player တွေကို တက္ကသိုလ်အဆင့် အားသစားသမားတွေအဖြစ် အသိအမှတ် ပြုလာကြပါတယ်။ ပြီးတော့ athletic scholar (အားသစားသမား အတွက် ပညာသင်ထောက်ပံကြေး) လည်းရပါသေးတယ်။
eSport အကြောင်းပြောရင် Electronic Sports League ကိုချန်ခဲ့လို့မရပါဘူး။ သူ့အကြောင်းကိုတော့ သပ်သပ်ရေးပါဦးမယ်။ သူကတစ်ခြားအဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ twitch ကနေ broadcast လုပ်ပေးခဲ့တာကြောင့် eSport ကအချိန်တို့အတွင်း ဒီလောက်မြန်မြန်တိုးတက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ESL ဆိုက 2000 ခုနှစ်တည်းက တည်းထောင်ထားတဲ့ eSport company ကြီးပါ။
လက်ရှိ eSport မှာ အအောင်မြင်ဆုံး ဂိမ်းတွေကတော့
The International ဖြစ်ပါတယ်။ 2010 ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ eSport မှာဆုကြေးအမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
Valve ကနေဦးစီးပြီးကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ 2013 မှာစတင်ပြီး ဆုကြေး USD25,000 ကနေ MLG Columbus 2016 မှာ ဆုကြေး USD1,000,000 (၁သန်း) ဖြစ်နေပါပြီ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးက Major တွေမှာ နိုင်လာတဲ့ 16 သင်း က Champion လုကြတဲ့ tournament ပုံစံကစားကြပါတယ်။ eSport လောကမှာ တမင်တကာ ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့ အသင်းကလည်း ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာ စဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအသင်းက ခုထိ Major တွေမှာဝင်ကစားခွင့်မရသေးပါဘူး။
သူက Dota2 နဲ့ယှဉ်ပြီးပြောကြပါတယ်။ ဒီဘက်ကမ္ဘာခြမ်းမှာတော့ သိပ်မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပွဲတွေပွထနေပြီးတော့ 2016 ခုနှစ်မှာ-
LOL ဆုကြေး USD29,203,916 DOTA2 ဆုကြေး USD64,397,286
LOL Players 4,083 DOTA2Players 1,495
LOL ပြိုင်ပွဲပေါင်း 1,718 DOTA2ပြိုင်ပွဲပေါင်း 613 ကိုတွေ့ရပါတယ်။
2006 ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Call of Duty : modern warfare နဲ့ စတင်ခဲ့ပြီးတော့ သူကလည်း Major league နဲ့ပဲဆော့ကြပါတယ်။ ladder နဲ့ tournament ဆိုပြီးပုံစံ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကမှာ ကစားသမားပိုများပါတယ်။
2014 လောက်မှာ သူ့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူ Hi-Rez ကနေ offline competition လုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးပြီးတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပြိုင်ပွဲတွေမှာနိုင်လာတဲ့ ထိပ်ဆုံးက team တွေကို 2015 မှာ Smite World Championship ဆိုပြီးတော့ ပွဲစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်။ အမေရိက၊ ဥရောပနဲ့ တရုတ်က အသင်းတွေပြိုင်ကြပြီးတော့ ဆုကြေး USD2.6 သန်းရှိခဲ့တဲ့ အတွက် အဲ့ ဒီအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာမှာ တတိယကြေးများဆုံး eSport Game ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ 2016 မှာတော့ ဆုကြေး USD1 mil ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။
သူကတော့ 2016 ခုနှစ်မှ စတယ်ဆိုပေမယ့် season ကျင်းပတဲ့ ရက် စိတ် တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်။ ESL ကနေ official eSport အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးပြီးသားပါ။ 1st season က March-August 2016, 2nd Season ကတော့ December 2016 မှာ ဆုကြေး USD125,000 နဲ့ အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။ 3rd Season ဖြစ်တဲ့ 2017 march-may မှာတော့ ဆုကြေး USD300,000 ဖြစ်လာပါတယ်။
Wargaming.net league တစ်ခုတည်းကပဲကျင်းပပေးပြီးတော့ အသင်း ၁၂ သင်းစီ ပတ်လည်ကစားထားတဲ့ CIS, APAC, EU နဲ့ NA လို့ခွဲထားတဲ့ region လေးခုကနေ ဗိုလ်လုပွဲပြန်လုတဲ့ ပုံစံကစားကြပါတယ်။ 2017-18 မှာတော့ အပြောင်းအလဲရှိမယ်ပြောပါတယ်။ 2016 မှာဆုကြေး USD300,000 ရှိပါတယ်။
သူကတော့ Closed beta မှာကတည်းက eSport တစ်ခုအဖြစ်လက်ခံခဲ့ပြီးတော့ 2014 မှာတော့ World Championsip Tournment ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ 2014 မှာ ဆုကြေးပေါင်း USD250,000 ရှိခဲ့တာမှာ အခုဆိုရင် 2017 မှာ USD1mil (၁သန်း) ဖြစ်နေပါပြီ။
2004 ခုမှစ်ကတည်းက Major League gaming ရဲ့ Sponsor နဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်လာခဲ့တာပါ။ 2007 မှာရပ်ဖို့ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ခုထိ ပြိုင်ပွဲဆက်ရှိနေပြီး အောင်မြင်နေဆဲပါ။
Blizzard ရဲ့ Starcraft:brood war ဟာသူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ranking system ပါလာပြီးတော့ အအောင်မြင်ဆုံး eSport game ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒီဂိမ်းကို အစွဲဆုံးလူတွေဟာ တောင်ကိုရီးယားကပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ tournament ပေါင်းမြောက်များစွာရှိနေပြီးတော့ Starcraft II စတော့လည်း beta testing မှာကတည်းက ပြိုင်ပွဲတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ထပ် game အသစ်တွေ ထွက်လာတာရယ် သူရဲ့အအောင်မြင်ဆုံး တောင်ကိုရီးယားမှာလည်း အမြတ်ဝေစုတွေ လုကြရင်း 2012 လောက်ကစပြီးတော့ လူစိတ်ဝင်စားမှု ကျလာ နေပါတယ်။ Battle.net Championship series ကတော့ ခုထိရှိနေပါတယ်။
Blizzard ကထုတ်တုန်းကတော့ ဒီ ဂိမ်းကို eSport အတွက် ထုတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ 2016 BlizCon မှာတော့ ပွဲကစနေပါပြီ။ နောက်မှ community ကောင်းမှုနဲ့ Overwatch league ဆိုတဲ့ နေရာဒေသခွဲတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း team တွေဖွဲ့ပြီးတော့ တစ်ခြား အားကစားပွဲတွေလို ကျကျနနဖြစ်လာအောင် စီစဉ်ဖြစ်ကြတာပါ။ လက်ရှိမှာ သန်းနဲ့ချီတဲ့ ဆုကြေးတွေအတွက် team owner နဲ့ developer တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးညှိနိုင်းဆဲပါတဲ့။ Full season ကိုတော့ 2018 မှာစမယ်ပြောပါတယ်။
အကြွေးတင်သွားတာက streaming app တွေရယ်၊ ESL တို့ အုပ်စုတွေ အကြောင်းရယ်ပေါ့။ နောက်အချိန်ရပြီးရေးဖြစ်ရင်တော့ ထပ် ဖတ်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျန်ခဲ့တာတွေရှိရင်တော့ REDplayer forum မှာ ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါလိမ့်မယ်။
Tags cs go dota2 eSport gamingarena
လူေျပာမ်ားေနတဲ့ TOMB RAIDER Poster...
Tomb Raider ရဲ့ ပထမဆံုး trailer...